In the game of roulette Club, udinga spin ibhola isondo esesikhundleni 37 Slots. The ball uyama nakoyedwa Slots emva kokusebenza wheel. Inhloso enkulu yalo mdlalo etafuleni ukuqagela kahle lapho slot ibhola uzoyeka. Ngokwenza lokhu, a inkokhelo kuyasetshenzelwa esigxotsheni yakho. Ubukhulu inkokhelo ziyehlukahlukana ohlotsheni esigxotsheni ezibekwe. Lena ngenye yama ayetholakala nomthengisi bukhoma etafuleni imidlalo wezwe. GAMES LIVE ukhiye MENU kumele kukhethwe ukushintsha etafuleni roulette noma khetha amanye game ahlukene bukhoma. The Live Dealer Inkinobho ikuvumela ukuba ukudlala nezinye imidlalo eminingi ngesikhathi Gameplay.
Mayelana unjiniyela Club Roulette
Le game is powered by NetEnt. NetEnt ubelokhu enikeziwe interface yomsebenzisi ithuthukiswa ukuze abadlali bayo kusukela 1996. Impumelelo enkulu le nkampani kuyinto ngoba imidlalo lakhiwa-ke ibaluleke ngempela futhi ngaphezu kwalokho bonke imidlalo etholakalako kuphi nanoma nini - mobile, okudayisa noma ideskithophu - okuvumela ukuba babone khona embonini multi-channel.
Kumele bezazi kahle ukuthandwa kwemidlalo yetafula zombili ezweni esekelwe kanye nezimboni casino online. Uma ukhetha ukudlala roulette Club, kuyomelwe ukuphila nakho real kwekhasino ezweni esekelwe.
Khetha esigxotsheni efanele on spin inikezwe ngokukhetha ukubheja amasimu efanele kuleli thebula game. I 'ukubheja obuphelele' window kubonisa ukubheja Imininingwane. Ungaphinda ezigxotsheni ezibekwe kule mdlalo langaphambilini ngokuchofoza inkinobho uphinda. Uma ukhetha inkinobho uphinda round odlule ukubheja, ke ukubheja kwakuyoba kabili. Ungafaka izinhlobo eziningi kubhejwa etafuleni roulette. Njalo uhlobo ukubheja lihlanganisa eyingqayizivele slot izinombolo kanye inkokhelo ethize is etholwe uhlobo esigxotsheni ngayinye. Ibhodi iqukethe nemigqa kuyo columns yilawo 12 zibaliwe imigqa eside kanti imigqa yizona 3 zibaliwe imigqa iDemo. The kubhejwa ngaphakathi kule game itafula 1st izinhlobo ezinhlanu ezigxotsheni. Ungafaka kubhejwa ngaphakathi Slots olunezinombolo. I kubhejwa ngaphandle zokugcina 3 izinhlobo kubhejwa futhi ungafaka laba amabhokisi esiyingqayizivele ukwethula ngezansi.
roulette Club kubhekwa njengento ekahle umdayisi bukhoma Roulette game evezwe ngu NetEnt. I ephelele eliphezulu ihluzo kanye amazing interface yomsebenzisi aphikise izilaleli.